I-Questex ikhaba kwiNtlanganiso ye-10 yonyaka yeCaribbean kunye noTshintshiselwano loKhenketho eCuraçao
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeCuracao Breaking News » I-Questex ikhaba kwiNtlanganiso ye-10 yonyaka yeCaribbean kunye noTshintshiselwano loKhenketho eCuraçao
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeCuracao Breaking News • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Agasti 7, 2019
Ukufuna ivule umhlangano wayo weshumi wonyaka weCaribbean & Incentive Travel Exchange (CMITE) namhlanje e I-Santa Barbara Beach & Resort Irizothi eWillemstad, eCuraçao.
I-CMITE izisa abacwangcisi beentlanganiso abasebenza e-US nase-Canada kunye nabathengi benkuthazo kunye nabathengisi abasekwe eCaribbean kangangeentsuku ezimbini ezinesiqingatha zamathuba okunxibelelana ngokukodwa kunye nokucwangcisela iintlanganiso ezizodwa ukuya kumagumbi abucala. Umsitho uququzelelwe namaqabane avela kwi-ECO DMS kunye neBhodi yezokhenketho yaseCuraçao.
Umnyhadala we-CMITE uqalile, ngenxa yemisebenzi yokunxibelelana enemveliso kunye nendawo entsha enomdla kwabo babekho eCuraçao entle, utshilo uJill Birkett, uMlawuli woMnyhadala weQuestex. “I-MICE portfolio portfolio yethu kuphela enikezela iintlanganiso zomntu ngamnye kwindawo yabucala kumagumbi ehotele zodidi kunye nemisebenzi yothungelwano enomdla, ebonelela ngexabiso elikhulu kubaxhasi nakubathengi ngokufanayo. I-Santa Barbara Beach & Golf Resort ibonelela ngendawo efanelekileyo yokuhlangana, ulwandle, igalufa kunye neendawo zokubhenela ezifunwa ngabathengi bethu xa becwangcisa iminyhadala yabo yeCaribbean. ”
Umsitho uvulwe ngokusesikweni ngale ntsasa apho iindwendwe bezonwabele isidlo sakusasa ngaphambi kokuba ziye kwindawo yabo yabucala. Usuku luza kuphela ngethuba lokundwendwela iMarriott Curaçao engekavulwa ukwamkela kunye nokhenketho olulandelwe kutyelelo kwiRenaissance Curaçao Resort kunye neCasino yeziselo, iidizethi kunye nokudanisa phantsi kweenkwenkwezi ngasemanzini aseWillemstad, apho abathengi kunye nababoneleli uya kuba nethuba lokuphumla kunye nokuphumla ngelixa uqhubeka nokwakha ubudlelwane. Iveki ithembisa ukonwaba kungabikho ukunqongophala kokonwatyiswa kwalapha ekhaya, ukutya okuyinyani, kunye nezinto zokuntywila ngokwenkcubeko.
Abaxhasi babandakanya imigca yokuhamba ngenqanawa, abaqhubi babakhenkethi, iinkampani zolawulo lwendawo ekuyiwa kuyo, iindawo ekufunwa kuzo emva koko, iihotele, iiholide kunye neepasile. Abathengi bamele amacandelo aphambili okuthenga, kubandakanya abathengi beenkuthazo kunye neenkampani zenkuthazo, kunye nabacwangcisi beentlanganiso.
Iminyhadala ye-Mice yeQela lokuHamba ye-Mice ibonakalise ukuba yimpumelelo ngokuba kuphela komququzeleli wokubonelela ngasese, iintlanganiso zabanye, kunye noqeqesho oluphezulu kunye namathuba okunxibelelana nabaqeqeshi kunye nabacwangcisi bemisitho, kunye nenkuthazo abathengi.